Shirkadaha internetka ayaa doonaya inay ka hortagaan sharciga lagu ogaanayo websiteyada la booqdo | Hangool News
“Waxay qaadataa in qof xun ay u suurto gasho inuu helo xogta oo dhan” ayuu sheegay James Blessing, oo ah gudoomiyaha ururka shirkadaha bixiya internetka ee (Ispa), oo ay ku jiraan shirkadaha BT, Sky, Virgin Media, TalkTalk iyo kuwo kale.
“Wax walba ayaad isku dayi kartaa si aad u ilaalisid xogta laakiin mar walba qof ayaa kaa aqli badinaya. Qaladaad ayaa dhacaya. Waa goorma ayay dhici doontaa. Waxaa la rajaynaa inay dhacdo tobanaan sano ama boqolaal sano gudahood. Laakiin waxay dhici kartaa toddobaadka danbe.”
Hadda, shirkadaha bixiya internetyada gaarka ah ee (VPN) ayaa ka faa’idaysanaya sharcigan bilaabanaya si ay adeegooda u bixiyaan.
“Waxaan aragnay sanadkii hore codsi badan oo ka yimid Australia markii sharciga diiwaan galinta xogta ay hirgashay” ayay BBC u sheegtay Jodi Myer, oo ah afhayeenka NordVPN.
“Waxaana hadda arkaynaa koror ku yimid dad reer UK ah oo doonaya inay ogaadaan adeegan”.
“Faa’iidadeenna noogu weyn waxay tahay inaan leenahay siyaasad inaan xogta la diiwaan galinayn,” ayay hadalkeeda ku dartay.
“Xarumaheennu waxay ku yaalliin dalka Panama, halkaas oo aan lahayn sharciyo xogta lagu haysanayo, saas awgeed waxay noo suurta gelinaysaa inaan arrintan sameyno.
“Xataa haddii ay waxa ugu xun dhacaanna oo kombiyuutaradeenna la qaado, wax noogu qoran ma jiraan waayo sida ay u qoran yihiin awgeed.”
Afhayeenka wasaarada arrimaha gudaha ayaa sheegtay in sharciga “(Investigatory Powers Bill), uu siinayo hayadaha ammaanka awooda ay u baahan yihiin inay ka difaacaan UK argagixisada iyo danbiilayaasha iyadoo aan sharciga lagu xadgudbeen.
“Argagixisada iyo danbiilayaasha waawayn waxay mar walba helayaan hab ay uga hortagaan inaan la ogaan.”
“Si loo hubiyo inaysan guulaysan, kama hadalno habka iyo awooda ay leeyihiin hayadaha ammaanka iyo sirdoonka.”
xigasho bogga bbc somali aqoon guud